Kismaayo News » Maalmo adag iyo Andalus.WQ Abdikadir Diriye
Maalmo adag iyo Andalus.WQ Abdikadir Diriye
Dhacdooyinka taariikhda waxaa in badan laga qaataa cashar lagu iftiinsado waqtiga markaa la joogo waayo taariikhdu iyadaa isa soo celisa oo wixii waa hore u dhacay ayaa in badan soo noqnoqda.
Maqaalkan wuxuu eegayaa dhammaadkii qarnigii labaad ee islaamka waqti u dhexeeyey 180H iyo 210H iyo dhacdo murugo, yaab iyo farxad kulansatay.
Waqtigaas waxaa madax ka ahaa Andalus (Spain iyo Portugal) nin la oran jirey Alxakam bin Hishaam. Ninkaasu horraantii xukunkiisa wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo dadkii uu xukumayey u keenay nabadgelyo kana adkaaday gaaladii cadawga ku ahayd dadkiisa.
Nabadgelyadii badnayd waxay dhalisay in cilmiga barashadiisa loo helo firaaqo oo aad loogu mashquulo golayaasha cilmiga kala duwan waxaana magaalada Qurduba (Cordova) keliya laga heli karayey ilaa afar kun oo culimo diinta aad u taqaan ah.
Xumaantii boqorku markii ay soo if baxday culimadii waxay ku tashadeen in ay xukunka ku wareejiyaan nin ay boqorka qaraabo ahaayeen oo wanaag ay ku malaynayeen oo la yiraahdo Axmed ibn Mundir. Waxay qabsadeen shir waxayna u yeereen ninkii Axmed ibn Mundir ahaa si ay ugu wargeliyaan qorshahooda.
Axmed waa soo dhaweeyey hadalkii culimada wuxuuna ku casumay inay habeenkii gurigiisa ugu yimaadaan si ay wax u qaadaa dhigaan. Intii aanay culimadu iman ayaa Axmed u tegey boqorkii oo u sheegay sida wax u socdaan. Boqorkii waa carooday oo wuxuu ku yiri Axmed “Waxaad iila timi inay dhiigayda daadiyaan ama aan kooda daadiyo, waana dad culimo ah ee sideen ku hubsadaa in waxa aad sheegayso run yihiin?” Axmed wuxuu boqorkii ku yiri igu darso qof aad ku kalsoon tahay oo kuu soo dhegeysta hadalka culimada. Axmed wuxuu sii kaxeeyey nin ka mid ah ciidanka boqorka wuxuuna ku qariyey daaha gadaashiisa meel ka qarsoon culimada markaas ayuu hadalkii ku furay inuu culimada weydiiyo magacyadooda iyo dadka hawsha la wada. Culimadii oo war-moogayaal iska ah ayaa tiriyey dhammaan magacyadii dadkii kula jirey qorshaha “Sheekh hebel, qaadi hebel….” Intaas oo dhan waxaa qoraya ninkii daaha gadaashiisa fadhiyey. Iyadoo hadalkii socdo ayaa mid culimadii ka mid ah gacantiisu taabatay ninkii daaha gadaashiisa ku jiray markaasay dareemeen in la shirqoolay waxayna u kala baxeen qaar baxsaday iyo qaar la qabtay. culimadii la qabtay todobaatan iyo todobo ka mid ah ayaa boqorkii laayey oo meydkoodii meel dheer suray si loo daawado.
Waxaa dhacday in nin ka mid ahaa culimadii ugu caansandayd Andalus oo la oran jirey Daaluut ibn Cabdiraxmaan uu ku dhuuntay guri uu lahaa nin yuhuud ah oo reer Qurduba ahaa si uu uga badbaado boqorka. Sannad markii uu ku jirey gurigii yuhuudka ayuu farriin u dirsaday nin wasiir u ahaa boqorka oo la oran jirey Abul Basaam si uu gurigiisa ugu soo wareego oo ugu dhuunto. Abul Basaam waa aqbalay oo shiikhii wuxuu ku soo wareejiyey gurigiisa. Laakiin dadku kala amaano fiicane, wuxuu u tegey boqorkii oo ku yiri “boqorow ka warran wan buuran oo sannad la kobcinayey” boqorkii wuxuu yiri “warka i sii”? Marksaasuu u sheegay inuu hayo shiikhii Daaluut ahaa. Markii shiikhii la keenay daartii boqorka ayuu boqorkii yiri “Daaluutoow, Haddii aabahaa ama wiilkaagu boqor ka ahaan lahaa daartaan ma kuu wanaajin lahaayeen sidii aan kuu wanaajin jirey? Abaalkii wanaagaya ma wuxuu noqday inaad dhiigayga daadintiisa ka talisid? Shiikhii wuxuu ku jawaabay “Intaas oo dhan oo wanaag ah waan qirsanahay, laakiin ilaahay dartiis ayaan kuu necbaa marka abaalkaagii waxaa igala weynaaday ilaahay”.
Cabdulqaadir Cabdi Diiriye,